Ma haystaa talooyin laga soo qaato Amazon liiska khabiir?
Inta badan annaga (ma aha in la yiraahdo Amazon liiska khabiir kasta) ogyahay in tani dhab ahaantii aad u xayeysiisay suuqa internetka waa aasaas ahaan boodh weyn oo raadinta badeecada. Waxyaabaha ay ka mid tahay in Amazon ay tahay meesha ugu weyn ee noocan oo kale ah waligeed laga helo Webka. Taas macnaheedu waa in heerka caadiga ah ee tartanka suuqa uu yahay mid aad u daran oo xitaa rabshado halkaas ka jira. Sidaa darteed, sida loo noolaado sida xaalad aan caqli-gal ahayn ee arrimo aan khilaafsaneyn oo ka taliya suuqa Amazon online-ka? Waa hagaag, waxaan aaminsanahay in fure u ah guulaha ganacsiga ee Amazon ku yaala si toos ah liiska keydintaada sheyga loogu talagalay keywords bartilmaameedka saxda ah si aad u heli karto khadka tooska ah ee sheyga si aad u ogaato. Iyo hoos ku qoran yihiin qaar macquul macquul ah iyo fikrado caqli ah oo laga soo xigtay Amazon liis khabiir ah si aad u wanaajiso boggaaga ku-oolleedka ilaa heer cusub.
Qalabaynta iyo Fikradaha laga soo xigtay Khudbadii Laylisyada ee Amazon
Ugu horreyntii, aynu wajahno - dhamaadka. Waxaan loola jeedaa in Amazon Best Buyers iyo xisaabinta rikoodhka guud ee wax soo saarka ay dhab ahaantii ku saleysan tahay waxqabadka guud ee ganacsiga, oo ay weheliso habka saxda ah ee liiska wax soo-saarka siinta raadinta alaabta. Xaqiiqdu waxay tahay in xisaabinta dhibcaha asaasiga ah si joogto ah dib loo eego si ay u cusbooneysiiso saacadlaha iyo waxay ka tarjumeysaa taariikhda ugu dambaysa ee iibka alaab kasta oo iibka ah. Oo halkan waa qaar ka mid ah talooyin iyo xirfado muhiim ah in la ogaado ma aha oo kaliya liis kasta oo Amazon liiska khabiir, laakiin ganacsade kasta oo hanti ganacsi leh oo bixiya nooc kasta oo ah iibka. Sidaa darteed, halkan waa waxa aad ka warqabto Amazon wax soo saarka wax soo saarka, gaaban.
Guud ahaan, waxaad haysataa qiyaastii 50 jibbaar si aad u buuxiso mid kasta oo ka mid ah shanta goobood ee raadinta. Waxyaabaha ugu caansan ee halkan ku jira waxay isticmaalaan xayawaankani si caqligal ah oo sameeya sida ugu fiican si aad u abuurto shuruudo fara badan oo dheer oo dheer.
Ereyada Shakhsi ahaaneed ee Qeexida (Aan Qeexin)
Xiriir ayaa ka mid ah qodobada ugu hooseeya ee raadinta raadinta ee ay yaqaanaan Amazon kasta, liiska khabiir. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in shaxanka saxda ah ee saxda ah uu yahay sidoo kale isir xigeen sare (oo ku saleysan tilmaamaha rasmiga ah ee Amazon).
1. taariikhda iibka guud;
2. horukaca iibka ugu dambeeyay (bil kasta, toddobaadle, iwm. );
3. qiimaha wax soo saarka iyo xulashada;
4. helitaanka hadda.
Shuruudaha Raadinta Muddada-dheer
Haka harin waqtigaada iyo dadaalkaaga dib u soo celinta wixii erey-raadin dheer ama mid shakhsiyeed oo horey loogu soo daray mawduucaaga, iyo sidoo kale liiska ee qoriga ayaa tilmaamaya bogga alaabtaada.
Inaad xor u noqoto in aad tixgelisid wixii isku mid ah oo isku mid ah iyo isku dhafka LSI ee kala duwan, taas oo laga yaabo inay isticmaalaan dukaamo badan oo raadinaya isla badeecada.
Waxaad ka fiicnaan laheyd inaad isticmaasho calaamadaha jumlada, guud ahaan sababtoo ah taasi waxay yarayn doontaa dhererkaaga xaddidan ee qayb kasta ee bogga.
Ha iskibrin adigoon wax isbeddel ah lahayn, qadiyad / jamac, iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee isbarbar dhigista - Amazon ayaa sheegaya in dadaalka noocan oo kale ah uu noqon doono mid aan waxtar lahayn, sababtoo ah raadiyeha raadinta wuxuu caadi ahaan u adeegsadaa isku dhafan sidan Source .